# 2010 (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« # စပ်မိ စပ်ရာ 2010
# ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ . . အပိုင်း (၁) »
# 2010 (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများPublished December 31, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	Posted in နက္ခတ်ဗေဒင်, သင်္ချာဗေဒ | Tagged (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်း, burmese zodiac, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, myanmar zodiac, myanmar zodiacal horoscope, myanmar zodiacal signs, zodiac astrology, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၂၀၁၀ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ	89 comments on “# 2010 (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ”	Moe Thaike on December 31, 2009 at 9:12 pm said:
ဆရာရေမင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်သစ်မှာဆရာဆီကနှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်ရလို့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ Happy New Year ပါဆရာ။
ဆရာဆီနှစ်သစ်ကူးဆုတောင်း email ပို့ထားပါသေးတယ်။
Mary on December 31, 2009 at 9:50 pm said:
Happy New year ! sayar .
Thank you so much for all ur posts.
ကိုရန် on December 31, 2009 at 10:01 pm said:
Happy New Year ပါဆရာ…
ဆရာ နဲ့ ဆရာ့ မိသားစု ကျန်းမာပါစေ….
ကြယ်စင်မင်း on December 31, 2009 at 10:06 pm said:
သွားပြီ..ဆရာရေ.. သွားပြီ..ကျွန်တော့်မိန်ရာသီကတော့ ဒီ2010 မှာ သုံးစားလို့ကိုမရဘူးပဲ..ဟူး.. သေပြီ..မနက်ဖြန်ရဲ့ ဆရာယတြာကိုပဲ စောင့်ရတော့မယ်..
ဘာပဲပြောပြော အားလုံး နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွင်ပါစေဗျာ..
Dr.Tin Bo Bo on December 31, 2009 at 10:08 pm said:
မိန်ရာသီက လုပ်ငန်းရှင်၊ အကောင်ကြီးကြီးတွေ မဟုတ်ရင် ပြဿနာ သိပ်မရှိပါဘူး။ နောက်ပြီး မှားနိုင်တဲ့ (35)%ထဲမှာ ပါမယ်လို့ယူဆလိုက်ပေါ့။
နှစ်သစ်မှာ စိတ်မညစ်ပါနဲ့ကွာ။ ပျော်ပျော်ဘဲပေါ့။
coldmay on December 31, 2009 at 10:10 pm said:
Ko Zay on January 1, 2010 at 12:23 am said:
ကိုနေ on January 1, 2010 at 12:34 am said:
ဆရာနှင့် မိသားစု ၂၀၁၀ နှစ်သစ်မှစပြီး သက်ဆုံးတိုင် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပါစေ၊ သူတော်ကောင်းတရားများကျင့်ကြံပွားများ အားထုတ်နိုင်ပြီး
(၇) ရက်သားသမီးကို ကယ်တင်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေ၊
Ko Zay on January 1, 2010 at 12:38 am said:
ကုံကတော့ကောင်းပါတယ်..ကျနော်က ၁၈ ဇြစ်နေလို့ မိန်ဘက်ကိုနွယ်သွားမလား…
Dr.Tin Bo Bo on January 1, 2010 at 12:39 am said:
တစ်ချို့နှစ်တွေမှာ (၁၉)ရက်နေ့အထိ မနေတော့ဘဲ (၁၈)ရက်နေ့မှာ မိန်ဘက်ကူးသွားတာလည်း ရှိတယ်။ အတိအကျ သိချင်ရင် ကိုဇေ မွေးတဲ့ ခုနှစ်ကလေးကို ပြောလိုက်ပါ။ ကျွန်တော် အနောက်တိုင်း သံဒိဋ္ဌာန်ပြက္ခဒိန်မှာ ကြည့်ပေးမယ်။ နှစ်တော်တော်များများမှာတော့ မိန်ရာသီကို (၁၉)ရက်နေ့မှ ပြောင်းတယ်။
Nyein Thu Aye on January 1, 2010 at 1:39 am said:
I can’t help myself on waiting for your second post to read.
May your family be in peace in year 2010…
မန္တလေးသူ on January 1, 2010 at 2:23 am said:
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ဆရာ့စာတွေကုို ဖတ်ပြီး ဆရာ့စေတနာကုို ခံစားရပါတယ်။ ဆရာတုို့ မိသားစု ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ လုိုရာဆန္ဒများလည်း ပြည့်ဝနုိုင်ကြပါစေ။
ko research on January 1, 2010 at 4:48 am said:
Thanks for your grate kindness.
Enjoy with your success.
red rose on January 1, 2010 at 4:58 am said:
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေဆရာ…အကောင်းအဆိုးရောနေတဲ့ လောကကြီးမှာ…နေတတ်အောင်ကြိုးစားရမှာပါ…ဆရာနှင့်မိသားစု ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ
thidar on January 1, 2010 at 10:28 am said:
Dear Saya ,Happy new year !2010.I wish the god bless you & your family.Thank you for your everything..
ရီလေး on January 1, 2010 at 10:36 am said:
Aries ကို ဖတ်လိုက်ရတော့ နည်းနည်းတော့ စိတ်ချမ်းသာ သွားတယ်..
ဆရာတို့မိသားစုကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။
YoungGun on January 1, 2010 at 2:47 pm said:
သေချာအောင် ကရကဋ်ရော ဗြိစ္ဆာပါ ကြည့်သွားတယ် ဆရာရေ။ တာရာမင်းဝေ ကဗျာထဲကလို ကံကြမ္မာ မရှိတဲ့ ဗေဒင်ဆရာ … ဖြစ်လာပါစေဗျာ.
Maverick on January 1, 2010 at 3:00 pm said:
နှစ်သစ်မှာ ဆရာတို့မိသားစု စ်ိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာရ်ျ ကောင်းကျိုးများစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ…
ပေါက်ပေါက် on January 1, 2010 at 3:04 pm said:
နှစ်သစ်မှာ ဆရာနှင့် မိသားစု ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
စန်းစန်းဝင်း on January 1, 2010 at 5:15 pm said:
တေးအေးရိပ် on January 1, 2010 at 5:22 pm said:
မင်္ဂလာ နှစ်သစ်မှာ ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်းမြောက် ပါစေ ဆရာ
စန်းစန်း ၀င်း on January 1, 2010 at 11:36 pm said:
နဒီမိုး on January 2, 2010 at 12:49 am said:
Ko Zay on January 2, 2010 at 8:34 am said:
Much appreciate for your kind attention and fast response.
My YOB is 1969.
I’m not sure Aquarius or Pisces.
dr.tin bo bo on January 2, 2010 at 10:03 am said:
ဂရင်းနစ် စံတော်ချိန်အရ 1969 ခုနှစ်မှာ ဖေဖေါ်ဝါရီ (19)ရက်နေ့မှ တနင်္ဂနွေ မိန်ရာသီကို ပြောင်းတာဖြစ်လို့ (18)ရက်နေ့ဟာ ကုံရာသီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုဇေဟာ ကုံရာသီဖွားဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ညီညီ on January 2, 2010 at 10:21 am said:
မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်မှာ ဆရာ၏ ဥာဏ်ပညာတွေလည်း ယခုထက်မက အဆပေါင်းများစွာ တိုးပွား၍ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကို ရရှိပါစေ။ ဆရာတို့ မိသားစု ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေ…
Ko Zay on January 2, 2010 at 11:22 am said:
Thanks for your kind advice and thoroughness.
ဂရင်းနစ် စံတော်ချိန်အရလို့ဆိုတားလို ရာသီဖွားတွက်ချက်မှုမှာ local standard time & birth place ပါထည့်စဉ်းစားရန်လိုပါသလားခင်ဗျာ
(ကြားရက်တွေကတော့ရှင်းပါတယ် ..စရက် ဆုံးရက် ကျနော်တို့လိုအစွန်ရက်တွေအတွက်ပါ)
Dr.Tin Bo Bo on January 2, 2010 at 11:23 am said:
အဲဒါဆိုရင် နာရီ၊ မိနစ် ထိအောင် လိုက်ရမယ်ဗျ။ ဒေသစံတော်ချိန်အရတော့ ကွာခြားမှု ရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ရာသီခွင် အကူးအပြောင်းရက်ကို ယူတဲ့နေရာမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ “စံ” ဖြစ်တဲ့ ဂရင်းနစ် အချိန်ကိုဘဲ ယူချင်တယ်။ ဒေသအလိုက်ယူနေရင် လူတစ်ဦခြင်းရဲ့ နာရီ၊ မိနစ်အထိ ယူမှ သဘာဝကျမယ်။ ဒီလိုမှ နာရီ၊ မိနစ်အထိ ယူနိုင်ရင်တော့ ဇာတာခွင်နဲ့ဘဲ ဟောတော့မှာပေါ့။ ဘာလို့ ယေဘူယျနဲ့ ဟောတော့မလဲ။
ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအားလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့အဟောဆိုရင်တော့ ဂရင်းနစ်ကို ယူတာ သဘာဝ အကျဆုံးထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အီးမေးလ် utinbobo@gmail.com ထဲကို ကိုဇေရဲ့ မွေးနာရီ၊ မိနစ်၊ မွေးဖွားရာဒေသ(မြို့) တွေကို ပို့ထားလိုက်ပါဗျာ။ ကျွန်တော် အားတဲ့ရက်မှာ ကြည့်ပေးပါမယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီလို အစွန်းကျနေတဲ့ ရက်တွေ နဲ့ ပက်သက်ပြီး သုတေသန လုပ်လို့ရတာပေါ့။ ကျန်းမာပါစေ။
wintthu on January 2, 2010 at 11:41 am said:
Happy New Year ပါဆရာ။ ခုလို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ။
ဆရာလည်း မိသားစုနဲ့တစ်ကွ စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် ပျော်ရွင်မှုများ ရရှိပါစေ ဆရာ။
စရှိုင်းလင်း on January 2, 2010 at 5:29 pm said:
ဆရာ နှစ်သစ်နဲ့အတူ ထာဝရပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့တဲ့အနာဂါတ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော် ..
ဆရာ့ရဲ့ ၁၂ ရာသီဟောကိန်းကိုလာဖတ်သွားတယ်နော်..ခုလိုတင်ထားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်.ဆရာရဲ့ဆိုဒ်ကို ကိုကြယ်စင်မင်း ဆိုဒ်ကနေသိရတာပါ .. ခုလိုဆရာ့ဆိုဒ်ကိုတင်ထားပေးတဲ့ ကိုကြယ်စင်မင်းကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. နောက်ပြီး ဆရာ့ရဲ့ဆိုဒ်ကလေးကိုလဲ LINK ကူးသွာနော်.. ကျေးဇူးတင်လျက် စရှိုင်းလင်း
Ko Zay on January 2, 2010 at 6:50 pm said:
ဟုတ်တာပေါ့ဆရာ .. ကျနော်တော်တော်အတွေးခေါင်တာပဲ..
နာရီ မိနစ် စက္ကန့် birth place ပါ လိုက်နိုင်မှတော့ ၁၃ ယောက်မှာ နှစ်ယောက်တူနိုင်တဲ့ ရာသီခွင်အဟောကို general prediction အနေနဲ့ပဲ မှတ်ယူရမှာပေါ့။
ဆရာခင်ဗျား.. အခုလိုဂရုတစိုက် သေသေချာချာ နားလည်အောင် ရှင်းပြပေးတဲ့အတွေက် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
ကြယ်စင်မိုး on January 3, 2010 at 6:56 am said:
၁၂ ရာသီ သားသမီးတွေ အတွက် စေတနာ နှင်. ဟောပေးထားတာ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
ဒီ ၂၀၁၀ မှာ သမီး တို. နှစ်ယောက်လုံး ကောင်းတာ ချည်းပဲ
ဆရာ.ကို ကျေးဇူး အထူး အထူး တင် ပါတယ်
Moe on January 3, 2010 at 6:23 pm said:
Thanks you very much for ur article that advice for all of us.
But I’m not include in below ur list since i was born on 24.
Thanks again, Saya;-)
ayeayethwe on January 3, 2010 at 11:18 pm said:
မင်္ဂလာပါဆရာ ဆရာရဲ.ဟောပြောချက်များကိုဖတ်ရလို.ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ကျွန်မကမိန်ရာသီဖွားပါ၊ ဆရာရဲ.ဟောချက်ကတော.ကွက်တိပါဘဲဆရာရယ်၊ဆရာရဲ.ဟောချက်ဖတ်ပြီးနောက်တနေ.မှာဘဲeuro 100 ကျပျောက်သွားပါတယ်။ကျန်းမာရေးအတွက်လဲမှန်ပါတယ်။ဆရာရဲ.ယ တြာposts ကိုစောင်.မျှော်နေပါတယ်။ ဆရာတို.မိသားစုရွှင်လန်းချမ်းမြေ.ပါစေ
Shwe Zin Oo on January 4, 2010 at 12:58 am said:
Thank you for your posting for 2010. I look forward to reading your future posting on yadayar. When is that expected to be online?
Joyce on January 4, 2010 at 2:34 pm said:
ဆရာ ………..ဒီ ပို့ စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။ ဆရာနဲ့ မိသားစု အတွက် လည်း Happy New Yr/Lucky New Yr ပါ ဆရာ။
Dr.Tin Bo Bo on January 4, 2010 at 5:08 pm said:
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ သို့
တစ်နှစ်လုံး မမောနိုင်၊ မပန်းနိုင် ဆောင်းပါးတွေရေး၊ ဗေဒင်တွေအခမဲ့ဟောပေးတဲ့ ရလဒ်အဖြစ် နှစ်သစ်မှာဝင်ရောက်နှုတ်ခွန်းဆက်၊ ကျေးဇူးစကားဆိုဖို့ သတိရကြတဲ့ မိတ်ဆွေများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလို မမေ့မလျော့ နှုတ်ခွန်းဆက်ဖော် ရကြတဲ့သူအားလုံးကို အသေအချာ မှတ်သားထားပါ့မယ်။ အကူအညီရှိရင် တောင်းကြပါ။ ကိုယ်တတ်နိုင်သရွေ့ အစွမ်းကုန်ကူညီသွားပါမယ်။ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။
pearl on January 4, 2010 at 6:48 pm said:
dr.tin bo bo on January 4, 2010 at 7:40 pm said:
ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကတော့ အများဆုံးအကျိုးပေးနိုင်တာ ကုန်သည်လုပ်ငန်း၊ သင်ကြားပြသခြင်းလုပ်ငန်း၊ ငွေကြေးစာရင်းအင်း ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ လူထုဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အကျိုးပေး နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ စီးပွားရေး ပုံစံတစ်ခုကို တိတိကျကျ ရွေးချယ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အတွက် အချိန်ယူရဦးမယ်။ ပြိးရင် လုပ်လုပ်ခြင်းလည်း ချက်ခြင်း အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်သေးဘူး။ အသက် (၃၆) နဲ့ (၅၄) ကြားမှာတော့ ခင်ဗျားဟာ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာပြီး ကျိကျိတက် ချမ်းသာကြွယ်ဝလာလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ အချိန်လိုသေးတာမို့ သည်းခံသာ စောင့်စားပေတော့။
agswemon on January 5, 2010 at 4:02 pm said:
မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်မှာ ဆရာ၏ ဥာဏ်ပညာတွေလည်း ယခုထက်မက အဆပေါင်းများစွာ တိုးပွား၍ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကို ရရှိပါစေ။ ဆရာတို့ မိသားစု ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေ
poparkyi on January 6, 2010 at 6:45 am said:
ဒီနှစ်ထဲမှာကန်ရာသီဖွားက (အဆိုးကန်) လိုပြောရမလိုဘဲ။အဆိုးတွေကိုကန်ထုတ်
တာလား? ကန်သွင်းတာလား?ဆိုတာ ( ကံ )ဘဲထားလိုက်ပါတော့မယ် ဆရာ။
HAPPY NEWYEAR FOR SAYA–
mayhninphyu on January 6, 2010 at 8:52 am said:
I was born on 18.3.82. I would be very thankful to u if u would tell me about my education.
K0 Zaw on January 6, 2010 at 6:50 pm said:
Thank for your kindness…….
I like your post & site…..
May you receive from new year 2010….
wealthy, healthy & happiness……….
Kyaw Myint Swe on January 7, 2010 at 3:19 pm said:
ဖန်အိန်လ်ဖ on January 7, 2010 at 9:20 pm said:
2010 နှစ်အတွက် ဆရာရဲ့ဟောစာတမ်းကိုဖတ်လိုက်ရလို့
ဆရာ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်…. (ကျွန်တော့် မွေးနေ့က 23.4.1976 ပါ ပြိဿရာသီဖွားပါ)ဆရာဟောတဲ့အတိုင်းမှန်မယ်လို့
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ယုံကြည်နေပါတယ်…ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ 2009 နိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာလ ဟောစာတမ်းတွေက ကျွန်တော့်အတွက် သွေးထွက်အောင်မှန်နေလို့ပါ…။
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ၊ ကိုယ်၏ကျမ္မာခြင်း နှင့်ပြီးပြည့်စုံ၍ အများအကျိုးအတွက်ဆတိုးထမ်းပိုးနိုင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား…။
tharhtooaung on January 8, 2010 at 11:37 pm said:
ကျွန်တော့်မွေးနေ့ က ၁၉ april 1991 ပါ။ကျွန်တော့်ကိုအလုပ်အကိုင်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးအသေးစိတ်ဟောပေးပါအုံး…..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ…..
Thu Ya Kyaw on January 9, 2010 at 5:49 pm said:
I want to know my fortune in brief sir.My birthdate is 22.1.1990,10:20pm,so Please foretell my future,sir
dr.tin bo bo on January 9, 2010 at 6:02 pm said:
ဗေဒင် မေးလိုလျှင် အမေး/အဖြေ ကဏ္ဍ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ စည်းကမ်းချက်တွေ ဖတ်ပြီး ၀င်မေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ဖြေမပေးတာနိုင်တာကို သည်းခံပါ။
တင်ထွန်းအောင် on January 15, 2010 at 12:52 pm said:
မင်္ဂလာပါ၊ ဆရာရဲ့ ခုနှစ်ရက် သားသမီးအပေါ်ထားတဲ့ စေတနာကို သိရလို့ လေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ မိန်ရာသီဖွားပဲလေ။ ဆိုးတာကတော့ ဆိုးတာပဲလေ။ ကောင်းဖို့အတွက်လဲ ကြိုးစားနေရတယ်လေ။ ဘာသာရေးလဲ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားလုပ်နေရတာပဲ။ ဒါမှ အညံ့တွေ အတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့သွားမှာပါ။ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျေးဇူးပဲနော် ဆရာ။
ချစ်ကြော့လေး on January 15, 2010 at 2:56 pm said:
သမီးကမကာရရာသီဖွားပါ သမီး2009 11 လပိုင်းလောက်မှာအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှူတခုရှခဲ့ပါတယ်
အချစ်ရေးကံဆိုးလွန်းလို့သမီးအချစ်ဆိုတာကိုထပ်ပြီးမပတ်သတ်တော့ဘူးလို့လဲ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဆရာ တခြားပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကတော့ကောင်းပါတယ်
ဟားဟားကျေးဇူးနော်ဆရာ သမီးအသက်က22 ပါ ဆရာပျော်ရွှင်ပါစေနော်
zayar aung on January 17, 2010 at 10:21 am said:
I was born 2.2.1993 and my date of birthday is Tuesday.SO my date of birth and birthday are identical.I am very thankful to u if u would tell me about my education in this year.
moonsu on January 21, 2010 at 6:20 pm said:
Dear sayar ;
သမီးက မိန်ရာသီဖွားပါ ဆရာ အဆိုးတွေချည်းဆိုတော့ ကြောက်တယ်ဆရာ ဒါပေမယ့် ဘာသာရေးလုပ်ရင် လျော့သွာားနိုင်လားဆရာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဆရာ။
dr.tin bo bo on January 21, 2010 at 7:55 pm said:
ရာသီခွင်ဖွားအဟောက ယေဘူယျလေ။ ဒီ တစ်လ,ထဲမွေးတဲ့လူတွေ အကုန်ညံ့ဖို့ ဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲ။ ဘာသာရေးကတော့ အဆိုးကြောက်လို့ လုပ်လုပ် မလုပ်လုပ် ကောင်းတာပါဘဲ။
Ei thandar myo on January 22, 2010 at 2:39 pm said:
28.4.91 (sun) သမီးပါ သောုကာသား 27.4.90 နဲ့ ညားမညားသိချင်လို့ပါ ဆရာ ကျေှးဇူးတင်ပါတယ်
dr.tin bo bo on January 22, 2010 at 6:44 pm said:
winmyint on January 24, 2010 at 9:32 pm said:
Thanksalot for ur predicting all the human being.
Nwe Ni Oo on January 26, 2010 at 3:13 am said:
Thanksalot for 2010 prediction.
May you and your family also happy, healthy & wealthy forever.
aye myat mon on January 31, 2010 at 7:45 pm said:
ဇူဇူထွန်း(ZU ZU TUN ) on March 2, 2010 at 4:00 am said:
ပညာရေး ။ အလုပ်ကိုင် ။ အချစ်ရေး ။ ကျန်းမာရေး အားလုံးသိချင်ပါတယ်ရှင့်။
dr.tin bo bo on March 2, 2010 at 8:14 am said:
chaw su hlaing on March 6, 2010 at 11:26 am said:
မွေးနေ့က 23.4.1981 ဖြစ်ပါတယ်။ဘ၀မှာ ကိုယ့်အားကိုကိုးပြီးတော့
kolin on March 12, 2010 at 1:27 pm said:
5.2.1983 born par.a chit yae nae eain htoung yae akyaung thi chin par the
စိုင်းမင်းသိန်း on March 16, 2010 at 11:53 pm said:
ကျ နော် မှာ ချစ် သူ ရှိ ပါ တယ် …
ကျ နော့ ချစ် သူ နဲ့ အ ဆင် ပြေ နိုင် မ လား …
ကျ နော့ မွေး နေ့ က ၂၀.၇.၁၉၈၉ ပါ ဆ ရာ ။ ………
juju on May 13, 2010 at 3:04 pm said:
ဆရာမင်္ဂလာပါ…..သိချင်တာလေးတွေသိလိုက်ရလို့ ကျေနပ်ပါတယ်…
ဆရာဟောထားတဲ့ထဲမှာ ….မှားတာလေးတစ်ခုပါ့တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်…8.5.1991ကိုမေးတဲ့အခါမှာ..မွေးနံကအဂါင်္သားပါ..ဒါပေမဲ့ ဟောကိန်းမှာဗုဒ္ဓဟူးဆိုပြီးဖြစ်နေပါတယ်..ဘာကြောင့်ပါလဲ?
ု့khin chan myae aye on May 13, 2010 at 7:41 pm said:
i want to know my future . Thank u!
Dr.Tin Bo Bo on May 13, 2010 at 8:18 pm said:
ဘာကိုပြောတာလဲ မသိဘူး။ 8.5.1991 က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့လေ။ အင်္ဂါသားဆိုရင် မွေးနေ့ က မှားနေပြီပေါ့။ နှစ်တရာပြက္ခဒိန်နဲ့ သေသေချာချာ ပြန်တိုက်ကြည့်ပါဦးကွယ်။ အမှားတခုကို ထောက်ပြချင်ရင် ကိုယ့်ဖက်က သေချာအောင် အရင် လုပ်သင့်တယ် ကလေးရေ။ ဟောဒီမှာ နှစ် (၁၀၀၀) ပြက္ခဒိန် နဲ့ သွားတိုက်ကြည့်လိုက်ပါ။ http://www.timeanddate.com/calendar/?year=1991&country=68
sadabawa on May 18, 2010 at 9:27 am said:
အလွန်ကောင်းတဲ့ နေရာလေးပါ။ ဆရာ
မောင်သောကြာ on May 19, 2010 at 9:56 pm said:
ကျွန်တော်က ၁၉၈၃ခု စက်တင်ဘာလ ၂၃ရက်နေ့ ညနေ ၅နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာမွေးတာပါခင်ဗျာ… သောကြာသားပါ… တချို့ဆရာတွေရဲ့ရာသီခွင်မှာ Virgo ဖြစ်ပြီး တချို့ဆရာတွေရဲ့ရာသီခွင်မှာ Libra ဖြစ်နေပါတယ်… ကျနော့အတွက် ၂၀၁၀က ဆရာ့ဆီမှာဆိုရင် Libra ကိုကြည့်ရလို့ပါ… ဘယ်ဟာက ပိုမှန်ပါသလဲခင်ဗျာ… နောက်ပြီး ကျနော့ရဲ့ ယခုနှစ်အတွက် ဟောစာတမ်းက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲသိချင်လို့ပါ… ဆရာ အားမှ အကြောင်းပြန်ပါခင်ဗျာ… ကျနော့ရဲ့ mail အကောင့်ထဲကို အကြောင်းပြန်ပေးပါဆရာ
Dr.Tin Bo Bo on May 20, 2010 at 1:57 pm said:
တနှစ်နဲ့တနှစ် ရာသီခွင်တခုကနေ တစ်ခုကို ကူးပြောင်းတဲ့ ရက်တွေ မတူကြလို့ ဒီလို ကွဲပြားမှုလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးက ကိုယ့်ရဲ့ စရိုက်က “ကန်ရာသီ” စရိုက်လား၊ တူရာသီ စရိုက်လားဆိုပြီး ချိန်ကြည့်တာ အကောင်းဆုံးဘဲ။ ဆရာရေးထားတဲ့ “၁၂ရာသီခွင်နှင့် လူသားများ” အပိုင်း (၂) မှာ ကန်ရာသီရဲ့ စရိုက်၊ တူရာသီရဲ့ စရိုက်တွေ ရေးထားပါ တယ်။ ချိန်ကြည့်ပေါ။ ဒီနေရာကနေ လင့်ခ် သွားလိုက်ပါ။ http://www.baydathukhuma.net/?p=1070
ုကိုမင်း on May 24, 2010 at 8:13 am said:
ဆရာ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်ရဲ့ ဇာတာလေးကို
၁၃၃၉ ခု တပိုတွဲ လပြည့်ကျော် ၉ ရက် ည ၉ နာရီ တိတိ သောကြာနေ့ ပါခင်ဗျာ
နာမည် က သိန်းဇော်မင်း ပါ ဒါပေမယ့် ကိုမင်း လို့ပဲခေါ်ကြပါတယ် ဆရာ
bukmacher on June 7, 2010 at 8:39 pm said:
winsoe on June 21, 2010 at 4:22 pm said:
winsoe on June 21, 2010 at 4:29 pm said:
ကျွန်တော် ခရီသွားခွင့် ဒီနှစ်မှာ ရှိမလာ ခင်ဗျာ…။
မွှေးရက်က7.9. 1988 ပါခင်ဗျာ….
ကိုသူရ on July 8, 2010 at 10:24 am said:
အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ . . .
Ma Sandar Soe on August 18, 2010 at 12:06 pm said:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ ဒီsiteကလေး ကိုအရမ်းနှစ်သက်တယ်
zawလေး on August 19, 2010 at 4:43 pm said:
zaw Thu Ya on August 27, 2010 at 2:56 am said:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာနဲ့တကွ မိသားစုအပေါင်းသာသနဝန်းထမ်းဆောင် နိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်းချမ်းမြေ့ပါစေ
laminphyu.94 on August 31, 2010 at 1:42 pm said:
၁၂ ရာသီဗေဒင်ကို ၇ ၇က်သားသမီးတွေ အတွက်ဟောပေးတဲ့ ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
aung thu on September 6, 2010 at 9:45 am said:
အခုလို ဖတ်ရတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
marnayoung on September 8, 2010 at 10:36 am said:
Nang Wain Pon Chit on October 4, 2010 at 3:07 pm said:
အခုလို ဆရာ့ရဲ့ ဗေဒင်လေးတွေ ဖတ်ရတဲ့အတွက် ၀ိုင်းချစ် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
နောက် ၂၀၁၁ မှာလဲ ၀ိုင်းချစ် ဆရာ့ရဲ့ ဗေဒင်အဟောလေးတွေကို မျှော်နေမယ်နော်
မြတ်သရဖူ on October 23, 2010 at 12:07 am said:
minkhine on February 27, 2011 at 9:01 pm said:
ဆရာကျနော်မှာအလုပ်အကိုင်အစဉ်းပြေမလာ.အချစ်ရေကံကောင်းမလာသိချင်ပါတယ်ဆရာ ခုနှစ်က၁၉၈၇ ၆လ ၂၅ရက် ပါ @mail minhtatkhine ပါ
ကိုအောင်ထူး on June 24, 2011 at 12:48 am said:
ဆရာကျနော်.ရိုသေးစွာဖြင်.စားရေးမေးခွင်.ပြုပါဆရာ+ကျနော်.မောင်အောင်ထူးပါဆရာအသက်1973/march.လ/11/ရက်ပါဆရာ လက်ရိုလုပ်နေတဲ.အလုပ်က အင်တာနက်ဖုန်းပါပြည်တွင်+ပြည်ပ ပါဆရာအခုကြုံတွေ.နေရတဲ.အခက်အခဲကတော.ငွေကြေးအခက်အခဲနဲ.စိးပွားရေးကျနေပါတယ်ဆရာပြန်လည်းအဆင်ပြေ အောင်မြင်အောင်ကျနော်.ကူးညီးပေးပါဆရာ+ဆရာလည်းစိတ်ချမ်းကိုယ်ချမ်းနဲ.ပြည်.စုံပါစေဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ကျ နော်.နေရပ်မွန်ပြည်နယ်+ကျိုက်မရောမြို.နယ်+ကျိုက်ပရန်ကျေးရွာပါဆရာ
khinmarlar on August 22, 2011 at 1:31 pm said:
ဘုတ်ဘုတ် on August 23, 2011 at 5:29 pm said:
ကျေးဇူးပြုပြီး သမီးရဲ့ ကံကြမ္မာကို တွက်ပေးစေလိုပါတယ်..သမီးလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်အကိုင် (ကွန်ပျူတာ)နဲ့အကျိုးပေးမပေး..သမီးရဲ့အိမ်ထောင်ရေးဇာတာနဲ့ ရေမြေခြားမှာသွားေ၇ာက်အလုပ်လုပ်ဖို့ကံပါမပါ သိလိုပါတယ်ဆရာ..ကျေးဇူးပြုပြီး သမီးအီးမေးလ်ထဲပို့ပေးပါနော်ဆရာ…လေးစားစွာဖြင့်
ဘုတ်ဘုတ် on August 23, 2011 at 5:30 pm said:
သမီးရဲ့မွေးနေ့က 13.3.1983 (တနင်္ဂနွေ)သမီးပါ..
nadimoenyo on May 10, 2012 at 2:56 pm said:
ဆရာ နှင့် မိသားစု ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်
ရိုစ့်ရည်မွန် on May 22, 2012 at 7:33 pm said:
သမီးသိချင်တာလေးတွေမေးပါရစေ..သမီးရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ကံကောင်း မကောင်းနဲ့ ဒီနှစ်ထဲ အိမ်ထောင်ကျနိုင်
သလားဆိုတာ သိချင်ပါတယ်…သမီးဘ၀မှာ အလုပ်အကိုင်ကောင်းကောင်းနဲ့ ရပ်တည်နိုင်မလားဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ် ဆရာ…သမီးက အင်္ဂါသမီးပါ…30.4.1991က သမီးမွေးနေ့ပါ..
(ကျေးဇူးပြု၍ သမီး အီးမေးထဲ ပို့ပေးပါနော်.)
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,831)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,471)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,205)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,052)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,077)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,401)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,222)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,722)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,769)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,415)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,357)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,225)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,165)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,137)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,457)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,420)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,105)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,909)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,770)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,762)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,293)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,898)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,795)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,746)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,615)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,571)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,355)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,222)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,167)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,077)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !